စင်ကာပူဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူတွေစပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်း အသေအချာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပေးတဲ့နာမည်လေးကိုတော့ တော်တော်သဘောကျမိတယ်… ကြည့်ပါဦှးဗျာ.. စင်ကာပူကနေ ဆင့်ကာပူ တဲ့. တစ်ကယ်လည်း ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်မူ၊စိုးရိမ်မူတွေ အပြည့်နဲ့ပါ။
ပထမဆုံးစင်ကာပူလေဆိပ်ကိုဆိုက်တာနဲ့ ကိုယ့် Stay အတွက် ဘယ်လောက်ရမလဲ စိတ်ပူရတယ်… Stay လေအဆင်ပြေတော့ Work အတွက်စိတ်ပူရတယ်။ ကိုယ်ရတဲ့ Stay အတွင်းမှာ မရရင်လည်းမြန်မာအခေါ် တိုင်ပတ်ရပြန်တယ်။ တိုင်ပတ်တယ်ဆိုတာကတော့ စင်ကာပူကနေအထွက်ပြပြီး မလေးရှား (Or) အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုကူးသွားပြီး စင်ကာပူကိုပြန်ဝင်လာတာကိုပြောတာပါ။ အဲဒီမှာလည်း ဥပမာ မလေးသွားပြီးဆိုပါစို့ မလေးမှာလည်းစင်ကာပူVisa အတွက်ကြိုးစားရသေး တယ်။ သိတဲ့အတိုင်းကျွန်နော်တို့ မြန်မာ က အဆင့်မီတော့ သွားလည်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ မသွားခင် Visa လုပ်ရတယ်လေ… တိုင်ပတ်ပြီးပြန်ဝင်ရင်လည်း Stay အတွက်တစ်ခါစိတ်ပူရသေးတယ်။ ပြီးရင်တော့ Work အတွက်ပေါ့လေ။ Work လေရလို့ စိတ်အေးမယ်မထင်ပါနဲ့… Pass အတွက်စိတ်ပူ ရသေးတယ်. တစ်ချို့ဆို Pass ရရင်တောင် Company က Black List ထဲပါသွားလို့ Pass ကို ပြန်အပ်လိုက်ရတာရှိပါသေးတယ်.. သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုပ်လာလုပ်ရတဲ့လူ တွေ ရဲ့ ဘ၀အစပေါ့ဗျာ…အလုပ်လေးရတော့လည်းစိတ်ကလေးချမ်းသာစရာပေါ့ဗျာ… ဒါပေမဲ့ တစ်ကယ်အလုပ်ရတော့လဲအလုပ်ကစိတ်ဖိစီးမူတွေပါအိမ်ကိုပါလာတာပါပဲ… ပထမ တစ်လလောက်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ နည်းပညာနဲ့လိုက်လျောညီထွေမူရှိအောင် မနည်း ကြိုးစားရတယ်..ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးတယ်။သူအလုပ်စဆင်းတဲ့နေ့ကအပြန်မှာ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်(၁) မှတ်တိုင်အလိုမှာ ဆင်းပြီးအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတလမ်းလုံးငိုတာတဲ့. အစကတော့ ကျွန်တော်မယုံဘူး.. ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှယုံတော့တယ်ဗျာ……..
အိမ်ခန်းလေးအကြောင်းလည်းပြောပြအုံးမယ်နော်……..အခန်းလေးကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ မြန်မာအကျဉ်းထောင်လေးကျနေတာပဲ.. ကျဉ်းလိုက်တာမှလွန်လိုက်တာဗျာ… အကျဉ်းထောင် ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုအထင်မကြီးကြနဲ့နော်… ကျွန်တော်လည်းတကယ်မရောက်ဘူးပါဘူးဗျာ… စာစောင်တွေထဲမှာပဲဖတ်ဖူးတာပါ…အိမ်ခန်းငှါးခကလည်း ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရသမျှ သူတို့ကို ကျွေးနေတာကျနေတာပဲ….ဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေရှိတာကတော့ကျွန်တော့တို့ ကျေးဇူးရှင်လေး တွေကျနေတာပါပဲ..တစ်ကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ထမင်း၊ဟင်း မချက်ရ.ရေဖိုးကတစ်ဝက်
ဖဲမွေ့ ယာပါးပါးနဲ့ 
ရွှေပိုးဝင် ဘ၀င်မှာ ရဲပြန်တော့…
လေအတိုးမှာ ညော်နံရယ်နဲ့ 
ပျံ့ လို့ ခေါင်းအုံး..
ကျွတ်ကျွတ်ညံညံငွေ Malay ရယ်နဲ့ 
ပွတ်ပွတ်ဆူကို စင်ကာပူတို့ က
လူ ငနုံကိုယ်တို့ငပျင်းတွေ
Posted by တောင်ပေါ်သား at 3:43 PM | Labels: စိတ်ခံစားချက်များ